6 barnaamij si loo abuuro a flash bootable bootable for Windows, Linux iyo macOS 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Barnaamijyada lagu abuurayo flash drive-ka bootable-ka ah waxay raadinayaan inay fududeeyaan u beddelashada USB flash drive-ka diskiga la ridi karo. Qalabkani wuxuu sii kordhayaa bedelida CD-yada iyo DVD-yada, midkoodna inuu ka soo kabto nidaamkii fashilmay ama uu ku rakibo xoq.
Liiska soo socda ayaa isu keenaya barnaamijka ugu fiican ee loogu talagalay Windows, macOS, iyo Linux qaybinta. Baadhid!
Loo maqli karo / Rufus
Lagu heli karo Boortaqiis, Rufus waa feyl la fulin karo oo aan xitaa u baahnayn in lagu rakibo kombuyutarkaaga si uu u isticmaalo. Codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid flash bootable boot ah si aad uga abuurto warbaahinta rakibida feylka ISO.
Sidoo kale waa suurtogal in la sameeyo habab lagu cusbooneysiiyo BIOS, firmware ama barnaamijyo ku qoran luuqad heerkeedu hooseeyo. Codsiga sidoo kale wuxuu leeyahay ikhtiyaar uu ku hubiyo flash drive-ka qaybaha xun. Horumariyayaashu waxay damaanad qaadayaan in barnaamijku uu laba jeer ka dhakhso badan yahay tartamayaasha waaweyn.
Rufus (bilaash): Windows | Linux
2. Rakibaadda Universal USB
Loo maqli karo / Pen Drive Linux
Universal USB Installer wuxuu u taagan yahay fududaantiisa adeegsiga. Kaliya dooro nidaamka qalliinka, faylka ISO, iyo usha USB. Kadib u tag Abuuri iyo ugu dhakhsaha badan. Barnaamijka waxaa loo isticmaali karaa oo keliya rakibidda nidaamka, laakiin sidoo kale dib u soo kabasho, nabadgelyo.
Software-ka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid aalado kabaha leh kaydinta joogtada ah ee qaybinta Linux. Muuqaalka ayaa ku siinaya inaad marin u hesho nidaamka nidaamka iyo kaydinta faylka.
Haddii aad u isticmaali doontid nooca la qaadan karo ee Windows, pendrive waa in loo qaabeeyaa sidii NTFS oo ay leedahay 20 GB oo ah meel bilaash ah. Xaaladaha kale, qalabka ayaa sidoo kale loo qaabeyn karaa sida Fat16 ama Fat32.
Rakibaadda Universal USB (bilaash): Windows | Linux
Laga soo bilaabo isla soo-saaraha sida Universal USB Installer, YUMI wuxuu u taagan yahay inuu rakibo qalab badan. Taasi micneheedu waa maxay? Taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku rakibto dhowr nidaamyo hawlgal, femar, kaydinta unugyada fayraska iyo kamaradaha, iyo kheyraadka kale, isla pendrive.
Caqabada kaliya ee jirta ayaa ah awooda qalab ee ay kuwada qabsan karaan kuwan oo dhan. Codsiga sidoo kale wuxuu bixiyaa suurtagalnimada abuuritaanka pendrive oo leh kaydin joogto ah. Si loo isticmaalo, waa in loo qaabeeyaa Fat16, Fat32, ama NTFS.
YUMI (bilaash): Windows | Linux | Mac OS
Loo maqli karo / Softonic
Windows USB / DVD Tool waa aaladda rasmiga ah ee Microsoft ay u sameysato flashable bootable boot ah si loo rakibo Windows 7 ama 8. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso nuqul ka mid ah feylka ISO, kaasoo isu keenaya dhamaan waxyaabihii rakibida Windows oo la isku daray
Si fudud loo isticmaalo, kaliya geli dariiqa warbaahinta ee dekedda USB, dooro ISO oo guji U dhaqaaq. Kadib raac tilmaamaha. Haddii aadan raadineynin waxqabadyo dheeri ah ama ikhtiyaarro qaabeyn ah oo ku saabsan bootinkaaga, tani waxay noqon kartaa dalabka adiga.
Windows USB / DVD Tool (bilaash): Windows 7 iyo 8
5. Diiwaan geliye
Loo maqli karo / Balena
Etcher waxay u taagan tahay fududaanteeda isticmaalka, in kasta oo ay iswaafajinayso nidaamyo kala duwan. Iyada oo kaliya qasabno yar, waxay kuu oggolaanaysaa inaad u rogto flash drive-ka warbaahin la qaadan karo, ha ahaato mid loogu talagalay qaybinta Windows, macOS, ama Linux. Waa ikhtiyaar wanaagsan dadka khibrad yar u leh duurka.
Etcher (bilaash, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay nooc la bixiyay): Windows | macOS | Linux
Loo maqli karo / Softpedia
WinSetupFromUSB waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku abuurto noocyo badan oo flash flash ah nooc kasta oo Windows ah, laga bilaabo XP ilaa Windows 10. Inkasta oo magacu diirada saarayo nidaamka Microsoft, barnaamijku wuxuu sidoo kale la jaan qaadayaa noocyada qaar ee Linux.
Intaa waxaa dheer, waxay bixisaa ikhtiyaarka ah in la kaydiyo barnaamijyada software-ka, sida antivirus, iyo cajaladaha soo kabashada ee soo saarayaasha kala duwan. Xitaa iyadoo ay jiraan hawlo fara badan, waxay u muuqataa inay leedahay interface dareen leh oo si sahlan loo isticmaali karo.
WinSetupFromUSB (bilaash): Windows | Linux
Waa maxay flash flash bootable ah?
Markii hore, waxay ahayd wax caadi ah in loo isticmaalo CD-yada, DVD-ROM-yada, iyo xitaa diskiyada diskiyada sida warbaahinta la kaban karo. Maaddaama inbadan oo kambiyuutarrada maanta ah aysan sii taageerin warbaahintaan, USB flash drive iyo kaararka SD ayaa boos ka helayay bedello.
Ka sokow in la sii qaadan karo, pendrive sidoo kale waa dhakhso badan. Adoo ka dhigaya mid la kaban karo, waxaad u isticmaali kartaa rakibe OS dibadeed. Barnaamijka rakibida ee disk-ka boot-ka ayaa si buuxda gacanta ugu haya kombuyuutarka wuxuuna qori karaa nidaamka jira ama wuxuu ku rakibi karaa mid cusub xoqida.
Qalabka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidii disk soo kabasho, awood u leh xalinta cilladaha nidaamka. Xaaladdan oo kale, nooc aad u fudud oo nidaamka ah ayaa loo adeegsadaa, laakiin leh dariiqyo ku filan iyo ilo lagu xalliyo dhibaatada ama ugu yaraan awood u yeelan karto inaad xog ka kaydiso xogta muhiimka ah.
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu gubayo CD, DVD iyo Blu-Ray
Sida loo soo dejiyo loona rakibo Google Chrome qadla'aan
Ka hortagga ugu fiican lacag la’aan kombiyuutarka